Umdlalo we-Umbrella (Uchaza i-Golf Bet)
"Umbrella," aka "umdlalo we-umbrella," ngumdlalo wegalufa okanye ukubheja kwecala kumaqela amabini phakathi kweqela lezine. Kwinqanaba ngalinye, amanqaku anikezelwa ngokusekelwe kwimiphumo emihlanu (esiyichazayo kwesekondari). Izinto eziphambili kwi-Umbrella zizo:
Icala elifezekisa ngalinye lalaba bantu abahlanu abafumana umvuzo kuthiwa bawubambe isiqulatho, kwaye amaqonga abo aphindwe kabini.
Ixabiso lexabiso ngalinye lezo ntlanu ezifezekileyo kwimigoqo nganye zifana nenombolo yomgodi: 1 iphuzu ngokuphumelela kwiHole 1; ezintlanu ngeempumelelo kwi-Hole 5; 12 ngeempumelelo kwi-Hole 12.
Umzekelo: Amanqaku emidlalo ye-Umbrella
Abadlali beGolati A, B, C, kunye neD benza iqela. Mhlawumbi ba maqabane abahlala bedlala kunye, mhlawumbi badlala umdlalo kwaye bahlelwe ndawonye ngokulandelelana. Kodwa banquma ukudlala ibhetla yokubheja.
Ngoko badibanisa: A kunye noB benza olunye icala, C kunye noD.
Kwinqanaba ngalinye, amanqaku anikezelwa nganye kwezi zinto zilandelayo zihlanu:
Umgangatho ophantsi komntu ngamnye phakathi kwegalufa ezine
Uhlangothi lwakho lunenani elipheleleyo lebhola eli-2
Utshitshisa obuluhlaza kumgaqo
Umlingani wakho uhlahlela oluhlaza kumgaqo
Ngaba wena okanye iqabane lakho wenza i- birdie
Zingakanani na ezi mpu melelo? Ixabiso lexabiso lilingana nenani lomgodi odlala ngawo. Ngoko kwi-Hole 1, nganye yezo zinto ezintlanu ixabisa enye ingongoma-ingqikithi yamanqaku amahlanu iyabhalwa. Kodwa ukuba elinye icala lihlutha yonke into emihlanu, amanqaku aphindwe kabini ukuya kwi-10.
Kodwa kwi-10 hole, amaphuzu abukeka njengale (ekubeni ixabiso leenkalo lihambelana nenombolo yomgodi):
Iingongoma ezili-10 kumanqaku aphantsi omntu ngamnye
Iingongoma ezili-10 kwicala lakho zinexabiso eliphantsi lebhola eli-2
Iingongoma ezili-10 ukuba uthe wubetha uhlaza kumgaqo
Iingongoma ezili-10 ukuba iqabane lakho lihlula uhlaza kumgaqo
Iingongoma ezili-10 ukuba ngaba i-birdie
Kulo mngca we-10, kukho iipalati ezingama-50 ezipheleleyo, kwaye ukuba elinye icala lihlutha yonke impumelelo emihlanu, ephindwe kabini.
Kucacile ukuba, amaphuzu aphakanyiswayo njengenyathelo elijikelezayo lithetha ukuba uxinzelelo lwakha ukusondela ukuya ekupheleni komjikelezo.
Ukubetha i-Umbrella Game
Konke malunga nokufumana ezo ngongoma. Amacandelo amabini adibanisa i-totals nganye ekupheleni komjikelezo kwaye umlinganiselo uhlawulelwa. Qaphela nje ukuba ungangeni phezu kwentloko yakho ngokwemigaqo yokubeka ixabiso lephuzu ngalinye.
Ngexesha lokufikelela kwiNombolo 18, amaphuzu angama-90 ayafumaneka kuloo mgobo owodwa (amaphuzu angama-18 nganye ngempumelelo). Ukuba udlala idola enye ngeyona ndawo, ingama-90 engama-90 engxenyeni enye-engama-$ 180 ukuba olunye uhlangothi lugxotha! Okubutyebi kakhulu kuninzi kuthi, kude. Ngoko ukhethe ixabiso lephuzu ngokuhlakanipha.
Olunye ukhetho luloluhlu lwabadlali abane begolfu kwiqela ukuya kwi-pot ngaphakathi kwinqanaba lokuqala. Emva koko, ekupheleni komjikelezo, kunokuba uhlawule umbahluko kumacandelo, icala lawona manqaku amaninzi lizuza i-pot.
Imbali Eboniswayo yeJavelin
Iingcebiso zokufundisa abantwana kwi-Waterski
Iqela elilodwa: Udlala njani umdlalo weGalofu
Yintoni iFakie kwi-Skateboarding?
Yiyiphi Ibhinqa leCandelo lebhola?
ImiSebenzi kwiShishini lokuThintwa kweSiqhwa
Ubomi be-Antonio Lopez de Santa Anna
Ukudibanisa neShinnecock Hills, enye yeeMbali zeMbali zeMbali zeMerika
Inyanga Yembali Yomnyama - Abanini bamalungelo abenzi baseMelika base-Afrika - A
Isikhokelo samazwi eFrentshi okuTywala
Iingcebiso ezi-5 zokubhala iNkqubo enenjongo kunye neeNkqubo zeZikolo
Ukuzaliswa kwezesondo kunye neziNzuzo
Indlela yokufaka i-Bracketless Windshield Wiper Blades
Ukuthelekisa & Ukuphathelene neGrisi Yamandulo neRoma yaseMandulo
Umtshato wamaSulumane kunye nokubandakanywa kwabahlobo kunye nosapho
IiJamani eziLungileyo zeJamani eziMandla